Iipropati zokwelapha zeziqholo
Njengomthetho, iziqholo zisoloko zisetyenziselwa ukwenza ukutya okuneziqholo kunye neziqu. I-spice ngayinye ayisiniki nje iindidi ezininzi zeemvakalelo, kodwa inceda ekujonganeni nezifo ezahlukahlukeneyo, ezifakayo kwiipropati zokuphilisa iziqholo. Abagcini nje ngokuxhasa imithi yethu kunye nokuphucula impilo yethu, kodwa banokulwa nazo zonke iintlobo zezifo ezisikhathazayo ebomini bethu.
Ukususela kumaxesha amandulo, abantu sele befumene iipropati ezahlukeneyo zeziqholo. Akukona nje ukunika ukutya enye inambitheka, kodwa kwakhona ukunyanzelwa kwezinambuzane, izilwanyana kunye nokuzikhusela.
Ukuxutywa okufanelekileyo kweziqholo kuyisiqinisekiso sempilo. Ngako oko, umntu kufuneka athathe ngokungakumbi ngokusetyenziswa kwexesha lokutya kunye nokutya ngokuthe ngqo kwiipropati zabo.
Ihlabathi liyazi ezininzi zexesha. Kwaye bahlula babe ngamaqela aphezulu:
Iziqholo zaseKlasini okanye ezingekho nto. Ezi ziqholo ziye zaba ngumzekelo weklastiki kwizifundo ezahlukeneyo, ezisetyenziswe ukususela kumaxesha amandulo. Zisoloko zisetyenziselwa kwifom eyomileyo kwaye ngoko kulula ukuthwala uhambo olude.
Iziqholo zendawo. Ezi ziqholo zisetyenziselwa kuphela kwindawo yazo, ezikwazi ukujamelana nokuhamba kweendlela ezide. Kulo hlobo lwesipelisi sisetyenziswe kuphela kwifomu entsha. Kwakhona, iziqholo zendawo zahlula zibe zimbini iintlobo: imifuno enobisi kunye nemifuno ecocekileyo.
Ezi mifuno zisetyenziselwa endaweni yazo, kodwa zixhaphake.
Kukho umyezo kunye nemifuno yasendle. Uhlobo oluqhelekileyo lwesimboli yintetho ekhethiweyo kunye nephunga elibukhali. Iintyatyambo zemiyezo zihlala zisetyenziselwa ukutshatyalaliswa kwaye zitsho njalo kwindawo, kwaye ukuvunwa kwezilwanyana kusendle.
Iipropathi zokuphilisa i-cumin
Kulo mzekelo siza kujonga iimpawu zezokwelapha ze-cumin. Le spice ayisebenzisi kuphela ekuphekeni njengendlela yokuphunga isobho kunye ne-pickle, kodwa isetyenziswe kwiiyeza zomntu.
Imifuno yembewu ye-caraway isetyenziselwa ukutyhefuza, ukunyanzeliswa, ukuguquka nokuveliswa kwemveliso yegesi. Isetyenziswe kwizigaba zokuqala zesifo sesifo sofuba, umntwana we-dyspepsia okanye kwiintsholongwane zesifo. I-Cumin isebenza njengento yokudambisa kunye ne-stimulate ye-mammary gland yabesetyhini abasetyhini.
Izakhiwo zonyango ze-anise
Kwizilwanyana zamanqaku, iipropati ze-anise zezilwanyana zisetyenzisiwe njenge-anti-inflammatory, antispasmodic kunye ne-expectorant. Le spice sele isetyenziselwa ukuphucula ukwahlula ubisi kubomama abancinci, njenge-diuretic and choleretic. Kwakhona ukhonza ukulwa nokuphuma kwamathumbu emathunjini kunye nokuya esikhathini.
Izinto zokuphilisa i-vanilla
I-vanilla isetyenziswe njenge-aphrodisiac enamandla kakhulu. Isakhiwo sonyango siyisithintelo sokulala, ukuphucula ukugaya kunye nokulinganisa i-acidity, ukunciphisa imiphumo yobutywala, nokuphucula amandla okuphumla.
Iipropati zokuphulukisa iifowuni
Iipropati ze-clove ze-spice zihluke kakhulu. Ngokuqhelekileyo, ioli ye-clove isebenza njenge-anesthetic kunye ne-antibacterial agent. Isenzo sazo sobomi kunye nesifo se-diaphoretic sikhuthaza ukususwa ngokukhawuleza kweetekisi ezivela emzimbeni.
Ukugqithwa kakhulu kusetshenziselwa i-pulpitis, i-caries kunye nesifo se-periodontal. Ngenxa yesenzo se-antimicrobial of clove siphelisa uhudo, kwaye sinciphisa ukubunjwa kwegesi kwiisango zamathumbu, kunye ne-cumin. Isiqwenga sisisitye esiyingqayizivele kokubambisa i-hiccups, kunye nokuphucula ukusebenza komsebenzi ngexesha lokubeletha. Kwakhona, izakhiwo zokuphilisa i-clove zisetyenziselwa ukuphulukiswa ngokukhawuleza kwamanxeba kunye nama-furuncle.
Ukuphilisa izakhiwo zeginger
Ngenxa yezinto zalo zokuphilisa, i-ginger isetyenziswe njengamayeza. I-Ginger ikwandisa inkqubo yokuzivikela komzimba kwaye inceda umzimba ukulahla iibhox. Ipropati eyona nto ibaluleke kakhulu yeginger isakhono sayo sokwandisa ukujikeleza kwe-cerebral, kunye nefuthe elimnandi elincinci.
Iipropati ezisebenzayo zeDandelion
Ilabiya yenzakala. Yintoni enokuyenza?
Ukuvuvukala kwamanyathelo ezandla kunye neenyawo unyango kunye nezilwanyana zomntu
Izindlela zabantu zokuphatha ingqolowa
Uya kuphi na ukuba umntwana uyalunywa yikhakiti
ICarotene kaDkt. Burro
Tart nge-chocolate filling kunye ne-protein cream
Yintoni eya kuba ngumnyaka we-2018 weNja yeLibra
Iposi lePapa ngoFebruwari 23, izandla zakhe, isigaba esilandelayo nesigaba esilandelayo nesithombe
Umxholo wemihla ngemihla yekwindla-2016
Iindlela zokuhlamba izitya: ukubunjwa, ukulimala, zokupheka ekhaya
Inyosi yokugcoba kwi-caramel kunye ne-baty sauce
Isifo esibulalayo sikaDmitry Khvorostovsky singashukunyiswa yintlungu
I-squash ye-spaghetti eneebhola kunye nesipinashi
Strawberry ngebhanana kunye ne-ayisikrimu